LANDELA iFleet El Al Israel Airlines v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
I-fleet El Al Israel Airlines v1.0 FSX & P3D
Usayizi 353 MB
Play 100 180
Umbhali: Gcwalisa uhlu ku-auto-installer / iphakheji
URikoooo ujabule ukwethula imikhumbi ephelele ye-El A ekusebenzeni phakathi nonyaka 2014 Le pack ihambelana neFlight Simulator X SP2 / ukushesha kanye Prepar3Di-v1 (v2 hlola lapha). Sithanda ukunikeza ukubonga ekhethekile kuzo zonke abalobi pack Freeware.
Umi 1948 njengoba National Airlines ka-Israyeli, siye sakhula saba othwala international ehlonishwayo.
By ukunakekela zonke izici zenkonzo, futhi abaqinisekise ukuthi izidingo abagibeli bethu ziyanakekelwa ngesikhathi, ngaso sonke isikhathi, EL AL is zibalwa IATA njengoba omunye ezintathu air abathwali wezwe eyiyo. With ekuhlanganiseni kwaso global wawanda, osekelwa uxhaxha international amahhovisi 77 yokuthengisa, EL AL unikeza ongenakuqhathaniswa izihambi Israeli, umthinta friendly uqobo elenza isikhathi ukundiza bese yenza EL AL okungaphezu nje imodi elula travel.
With inhlanganisela yethu eyingqayizivele Izinsiza izinzuzo, okuyinto bamukele bathanda international, okwenza EL AL isibe ayethanda gateway global kuwo wonke amagumbi zezwe. (Umthombo: El Al iwebhusayithi)
Lokhu iphakethe siqukethe le ndiza ezilandelayo:
- Boeing 767-300ER akukho VC kodwa ephelele 2D panel
- Boeing 777-200ER + VC Ibhonasi:
Indiza ngezansi ziyingxenye yomlando yemikhumbi kanye awasenaso ezivelele. Ngakho they thembisa njengoba ibhonasi.
- Boeing 747-200 + VC (RFP elidala livery)
- Boeing 767-200 (livery elidala) akukho VC kodwa ephelele 2D Ifasitelana lama
Indiza ngayinye ifakiwe nohlelo lokumemezela abahambeli kanye nabashayeli bezindiza ukukhuluma, i-GPWS (uhlelo lwe-Ground Proximity Warning), uhlelo lwe-Pushback, imisindo yangokwezifiso, ukwakheka ebusuku, ukugqwayiza, ukulungiswa kwezimbungulu ezivame kakhulu, ukuzivumelanisa nezimo P3Di-v1, ama-gauges amasha nokuningi.
Zonke izindiza ezifakwe imibhalo, ezimweni eziningi kusuke amafayela likaNGIFUNDE, manual, doc, njll
Prepar 3D v2.x: incompatibilities kulindeleke
- Zonke izindiza ziyahambelana P3DI-v2 ngaphandle kwe-Boeing 747-200 Ready for Pushback (RFP) amanye ama-gauge awasebenzi, kufaka phakathi "Iphaneli Fuel" ne "geji yomsindo".
- The VC of 777-200ER kanye 757-200 Awunawo functional chofoza ndawo futhi abanye Izikali ukukhanya, kodwa ungakwazi ukundiza indiza kusukela panel 2D.
- Uhlelo lwe-Anti-missile alusebenzi ngaphansi P3Dv2 - cindezela (i)
- Mhlawumbe ezinye izimbungulu kodwa ezincane.
El Al kuyinto le nkampani ephephe kunayo yonke emhlabeni njengoba libhekene usongo oluqhubekayo amaphekula, ngakho iviyo lalo lemikhumbi yempi ifakwe zokuvikela nezibiza izigidi zamaRandi izindiza ngalinye.
Exclusive El Al imikhumbi, i system anti-missile kuyinto ekhona indiza (press (i) ukwenza kusebenze). Planes ngemibala ezindala ifakwe lesi simiso, ngoba ngaleso sikhathi El-AL akazange ukuyisebenzisa. Lolu uhlelo ziwusizo ngokukhethekile phakathi ukusuka kanye kokwehla ngokumelene ibangana kweminsalo, asikwazi sithi El-AL isebenzisa uhlelo oluqondile ezingaphezu kwalezi ezenziwe yilo pack ngoba inkampani efuna ukugcina imfihlo imishini yayo. Nokho, i-C-130 Hercules empeleni usebenzisa it. isithombe Proof (ngakwesokunxele):
Ngokokuqala ngqa, uRikoooo wazivumelanisa nezimo futhi walungisa i-Boeing 747-200 RFP (Ilungele i-Pushback) ye FSX futhi P3DI-v1 igcina imisebe yasekuqaleni, lesi sengezo saziwa ngokuba yinkimbinkimbi kakhulu esake saba khona ku-freeware ye-FS2004, kufaka phakathi izinqubo ezinengqondo zangempela, amasistimu we-hydraulic, INS (Inertial Navigation System) njll. Uzofunda ukufaka umkhondo impukane, senze ividiyo (okwamanje inthanethi) echaza inqubo yokuqalisa injini ngaphansi FSX. Lesi sengezo siyatholakala njenge- Ibhonasi kule iphakethe kodwa ayisekho ingxenye yemikhumbi langempela.
Kubalulekile ukulandela imanyuwali efakwe kwiphakethe: Qala Imenyu / Okwengeza i-Rikoooo / Flotte El Al FSX & P3D / Imibhalo XXX noma ngesixhumanisi esiqondile: "C: / Abasebenzisi /votre_username /AppData / Iyazulazula / Microsoft / Windows / Qala Menu / Izinhlelo / Rikoooo Yezengezo "
ISEXWAYISO: I ins gauge (Inertial Navigation System) is hhayi kufakwe 747-200, kufanele thwebula it ngokwehlukana, iphaneli 747 isivele pre-amisiwe Rikoooo ukusebenza leli gauge Delco Carousel IV-A ins v. 1.51 kusuka simufly.com.
Thwebula Delco Carousel IV-A ins (Ukufakelwa): http://www.simufly.com/ins/download.html
Bambalwa izithombe kusukela 747-200 RFP (Bonus):
izithombe-skrini Global, chofoza sandise (sibonga IsizweFSX):
I-Corsair International Fleet FSX & P3D